मेरो जित व्यक्तीगत हैन राष्ट्रकै जित हो – डा. भट्टराई-Nagarikaawaj.com
मेरो जित व्यक्तीगत हैन राष्ट्रकै जित हो – डा. भट्टराई
घरदैलो कार्यक्रममा डा. भट्टराई । उहाँ शनिवार विहानैदेखी साझँसम्म विभीन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ ।
बुटवल, १ मंसिर । एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो जित व्यक्तिगत नभई समग्र राष्ट्र र लुम्बिनी क्षेत्रको तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको जित हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न केन्द्रीय नेताहरु एक ठाउँमा खुम्चिनु नहुनेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो ‘केन्द्रीय नेताहरु एकै ठाउँमा बाँधिएर बस्न हुँदैन, राष्ट्रिय सोच राख्नुपर्छ, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्नुपर्छ, त्यसैले म यस क्षेत्रमा आएको हुँ, हाम्रो जित सबैको जित हुनेछ ।’
चुनावी प्रचारप्रसार अभियानको अन्तिम दिन शनिबार बृहत मोटरसाइकल र्‍याली समापनको अवसरमा बुटवलमा आयोजित जनसभामा बोल्दै भट्टराईले अबको एक वर्षमा संविधान बनाउने र त्यसपछि आर्थिक विकास र समृद्धि नै देशको मुख्य एजेण्डा हुने बताउनुभयो ।
अबको मुख्य आवश्यकता आर्थिक क्रान्ति नै भएकोमा जोड दिदै भट्टराईले देशको आर्थिक केन्द्र, आर्थिक राजधानी बुटवल भएको र यसको विकासबाट देशलाई नै समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
देशमा जलस्रोत, वनजंगल लगायत अपार सम्पदा भए पनि लुम्बिनी एक नम्बर सम्पदा रहेको भन्दै भट्टराईले २१ औ शताब्दीमा विकासको डाइनामो यही क्षेत्र बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी र बुटवलले सीधै सिंहदरबार र बालुवाटारको पहुँच खोजेको भन्दै भट्टराईले कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले आफूप्रति देखाएको सदभाव र सहानुभूतिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । कुनै दलविशेषको नेता नभएर साझा नेता बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै भट्टराईले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस एमालेका साथीहरुको सहयोगले काम गर्छु, राष्ट्रकै हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छु, यहाँको साथ मलाई जरुरी छ ।’
सो अवसरमा बोल्दै एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्यले ल्यापटप र मोबाइल बाँडेर एमाओवादीको जित रोक्न नसकिने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अर्का केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद बन्जाडे ‘टंकमणि’ले अग्रिम विजयको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचन परिचालन कमिटी रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ ले आज बृहत् मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ ।
बुटवल–१२ स्थित बुटवल मण्डपबाट दिउसो १ बजे शुरु भएको मोटरसाइकल र्‍यालीको शुभारम्भ एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता तथा रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।
हजारौं मोटरसाइकल सहभागी र्‍याली बुटवल नगर हुँदै पर्रोहा, मोतिपुर गाविसका विभिन्न स्थानको परिक्रमापछि बुटवलको ट्राफिकचोकमे समापन भएको थियो ।
मेरा अग्रज सूर्यप्रसाद प्रधानजीले बुटवलमा केही गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको हो, अब उमेरले वयोवृद्ध भइसक्नुभएको छ, जुन गतिमा यो ठाउँको विकास आवश्यक छ, मेरा आदरणीय दाजु प्रधानलाई कष्ट दिइराख्नुपर्छजस्तो लाग्दैन, उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिने हो, दिनुपर्छ । उहाँका राम्रा कामलाई टेकेर अगाडि बढ्ने छौं ।
मेरा अन्य मित्र विष्णु पौड्यालजी भिन्न पार्टीमा भए पनि व्यक्तिगत रुपमा असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । विगतमा हामी एउटै क्याबिनेटमा रहेर पनि काम गर्‍यौं । र म अर्थमन्त्री छँदा उहाँले यहाँको खानेपानी, बाटोघाटो लगायतका योजनाहरुमा मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले निकै सहयोग गरेर योजनाहरु अगाडि पनि बढाएका हौं । तर अब बुटवलको विकास तीब्र गतिमा, जेट विमानको गतिमा विकास गर्न आवश्यक छ र बुटवलले सीधै बालुवाटार र सिंहदरबारमा पहुँच खोजेको छ, अब छेउछाउको पहुँचले हुनेवाला छैन । त्यसैले मेरा मित्र पौडेलजीले पनि बदलिएको परिस्थितिलाई बुझेर फेरि मसंग सहकार्य गरेर जाने सद्भाव देखाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । र, मैले उहाँले अगाडि बढाएका कामहरुको सम्मान गर्दै त्यसबाट अगाडि बढेर बुटवल र यस क्षेत्रको विकास गर्नेछ, उहाँको साथ र सहयोग निरन्तर लिनेछु । उहाँले पनि आफ्नो पराजयलाई अन्यथा लिन हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।